Cilmi-baaris: Duumada Afrika oo la qabsanaysa dawada - Sabahionline.com
Cilmi-baaris: Duumada Afrika oo la qabsanaysa dawada Abriil 27, 2012
Dulinka mallaariya ee ugu dilaa-san Afrika ayaa muujinaya in uu adkaysi ka samaysanayo dawooyinka suuqa yaal kuwa ugu awoodda badan, cilmibaarayaal London jooga ayaa arrintaa shaaca ka qaaday Jimcadii (27-ka April). Qodobbo la xiriira
Tansaaniya oo qorshaynaysa in ay laba-laabto isticmaalka adeegga uur-ka-celinta dumarka sanadka 2015-ka
Calanka Kenya oo laga taagay Tuulada Olambikada ee London
Saynisyahannada ayaa helay adkaysi ku lid ah dawada ka hortagga mallaariyada ee artemether mar ay tijaabo ku sammeeyeen tuubbo lala falgashay dhiig laga soo qaaday 11 ka mid ah 28 bukaan oo ay jirro soo ridatay ka dib markii ay u safreen waddamo u badan kuwa Saxaraha ka hooseeya, iyagoo waxyaabihii ay ogaadeen ku daabacay Malaria Journal oo ay leedahay madbacadda BioMed Central. "U adkaysiga tuubbada tijaabada waxay inta badan markii cabbaar la joogo keentaa u adkaysi caadi ah oo ay bukaannadu samaystaan,” ayuu yiri hormuudka cilmi-baaristan, Sanjeev Krishna, sida ay shaagtay AFP-du. "Waxa ay taasi ku micnoobayso marka laga hadlayo in ay daweyntu guuldarraysan karto, waa mid aynaan weli qiimayn ku samaynin.” Adkaysiga uu dulinku u adkaysan karo daweynta ayaa keenaysa walaac ku saabsan suuragalnimada in mustaqbalka ay dawooyinku waxtar ka noqon waayaan gaar ahaan Afrikada Saxaaraha ka hoosaysa oo ay sannad waliba 90% dhimashada mallaariyada la xiriira ee adduunku ka dhacaan. Sida uu qabo Ururka Caafimaadka Adduunka (WHO) waxaa 2010-kii mallaariya u geriyooday 655,000 oo qof. Mallaariyadu Waa sababta shanaad ee waxyaabaha sida badan loogu geeriyoodo waddamada soo koraya. Muxuu kula yahay qoraalkan?